Alacritty - Emulator Terminal Hafainganana GPU | Avy amin'ny Linux
Alacritty - Emulator Terminal haingam-piasa GPU
Ny andro ankehitriny hanararaotra hiresaka emulator terminal tena mahaliana izahay, ity emulator ity tsy toy ny hafa dia mampiasa ny GPU hanatsarana ny fahombiazan'ny sy ny hafainganan'ny fampiharana amin'ny rafitra.
Ny fampiharana izay horesahintsika anio dia Alacritty, ity fampiharana ity dia emulator terminal izay mampiasa ny GPU hampiharana fanatsarana izay tsy azo atao tsotra izao amin'ny emulator terminal hafa amin'ny Linux.
1 Momba an'i Alacritty
1.1 zavatra takiana alohan'ny
2 Ahoana ny fametrahana Alacritty amin'ny Linux?
Momba an'i Alacritty
Ity fampiharana ity voasoratra amin'ny fiteny fandaharana Rust ary mampiasa OpenGL amin'ny fandikana azy, ity dia mahatonga ny fampiharana ny emulator terminal haingana indrindra.
Io emulator terminal io mifantoka amin'ny fahatsorana sy fahombiazan'ny tanjona roa. Midika ny fahombiazana, tsy maintsy ho haingana kokoa noho ny emulator terminal hafa misy izany. Ny dikany dia midika fa tsy manohana fiasa toy ny kiheba na fisarahana.
Si te-hametraka an'ity terminal emulator ity amin'ny rafitrao ianao, tsy maintsy manana ny fiteny fandaharana Rust napetraka ao amin'ny rafitray izahay.
zavatra takiana alohan'ny
Azonao atao ny manamarina ny fomba fametrahana Rust amin'ny Linux amin'ny lahatsoratra teo aloha izay nataoko, rohy izany.
Efa azo antoka ny fametrahana an'io fiteny io amin'ny rafitray, mila mametraka fiankinan-doha ilaina amin'ny fampiharana izahay.
Ho an'ireo izay Mpampiasa Debian, Ubuntu, Linux Mint na derivative rehetra Amin'ireny dia tsy maintsy manokatra terminal misy ctrl + Alt + T isika ary hanatanteraka ity baiko manaraka ity:
Raha ny tranga Ireo mpampiasa CentOS sy RHEL dia mametraka ny fiankinan-doha amin'ny:
Raha mpampiasa ny Ny Fedora 28 dia azo apetraka miaraka amin'ity baiko ity eo amin'ny terminal:
Raha ny an'ireo mpampiasa ny Arch Linux, Manajaro, Antergos na izay derivative an'ny Arch dia apetraka miaraka aminay:
Farany, ho an'ireo izay dia mpampiasa an'ny kinovan'ny openSUSE:
Efa napetrakao ny fiankinan-dohaAzontsika atao ny manohy mametraka ity emuator terminal ity amin'ny rafitray miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto.
Ahoana ny fametrahana Alacritty amin'ny Linux?
Ireo izay mpampiasa Linux Arch ary avy aminy, azontsika atao ny mametraka ny rindranasa avy amin'ny tahiry AURMila manana mpanampy fotsiny isika amin'izany.
Amin'ity tranga ity hampiasa aurman izahay, ny baiko hametrahana ny emulator terminal dia toy izao:
Raha ho an'ireo mpampiasa openSUSE azontsika atao ny mametraka ny rindranasa amin'ny rafitra miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Azontsika atao ny mampiasa an'io fonosana io ihany manolotra ho an'ny openSUSE izy ireo ho an'ny Fedora, CentOS, RHEL na fizarana rehetra misy fanohanana ireo fonosana rpm.
Ny baiko manaraka fotsiny no ampidininay, ho ireo mampiasa rafitra 64-bit:
Ho an'ireo izay mampiasa rafitra 32-bit izy ireo:
Ary apetrakay amin'ny:
Para Ny ambiny amin'ireo fizarana dia tsy maintsy misintona sy manangona ny kaody loharano mba hametrahana ny rindranasa.
izany Toy izao no ataontsika, tsy maintsy manoratra isika:
Raha vantany vao vita izany dia tsy maintsy ataontsika amin'ny PATH ny binary ary hamboarantsika ny fidirana mivantana, izany hoe, ataontsika amin'ny baiko manaraka ireto:
Ary farany Ampidirinay ao amin'ny Shell ny setting ilaina amin'izany, ho an'ny Bash:
Ho an'ny ZSH
Ary ho an'ny JONO
Ary vonona amin'izany dia afaka mihazakazaka ny emulator amin'ny rafitray.
ihany koa azontsika atao ny mametraka ity emulator terminal ity avy amin'ny Snap, na dia tsy ofisialy aza ilay fonosana. Ho an'ireo izay tia an'io fomba io dia tsy mila manoratra fotsiny isika:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Alacritty - Emulator Terminal haingam-piasa GPU
tranki dia hoy izy:
Inona no tanjon'ny terminal tohanan'ny GPU?
Mamaly an'i tranki
OpenShot 2.4.2 tonga miaraka amin'ny endri-javatra vaovao sy ny vokany vaovao